Shaqaale ka tirsan Wasaaradaha Xukuumadda oo tababbar loogu soo xiray Muqdisho “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Tababbarkan ku saabsanaa maamulka xafiisyada dowladda oo ay iska kaashadeen Wasaaradda amniga Gudaha iyo xarunta Muqdisho ee cilmibaarista ayaa waxaa ka qeyb galay xiritaankiisa mas’uuliyiin ka tirsan Wasaaradda amniga gudaha iyo marti sharaf kale, kaasi oo lagu qabtay Muqdisho, waxaana siminaarka socday muddo labo cisho ah.
Axmed Maxamed Rooble madaxa tababbarka ee xarunta ayaa sheegay in simaarkan ay ka faa’iideysteen 15 shaqaale oo ka kala tirsan Wasaaradaha Haweenka, Cadaaladda, Awqaafta, dhalinyarada, amniga iyo kuwa kale, ayna joogteynayaan siminaarada nuucaani oo kale ah.
Agaasimaha waaxda arrimaha bulshada iyo wacyi gelinta ee Wasaaradda Amniga Cabdulaahi faarax ayaa sheegay inay tahay wax lagu farxo in shaqaale ka tirsan Wasaaradaha Xukuumada ay ka faa’iideysteen tababbarkan.
Agaasimaha tababbarada iyo qorsheynta ee Wasaaradda amniga gudaha Liibaan Cismaan Nuur oo soo xiray siminaarka ayaa sheegay in ka Wasaarad ahaan ay gacan ka geysanayaan sidii loo joogeyn lahaa sare u qaadidda aqoonta shaqaalaha Wasaaradaha dowladda.
Ugu dambeyntii waxaa shahaadooyin la guddoonsiiyay qaar ka mid ah dadkii tababbarka ka qeyb galay.
Wasaaradda Diinta: "Berri waa maalinta koobaad ee Ramadaan" Dhageyso